गाउँको एक चौतारीमा एउटा सानो कार्यक्रमको आयोजना भैरहेको थियो जुन कार्यक्रमको उदेश्य थियो ''समाजमा भएको बिक्रिती बिसंगती बिरुद्द नारा''जुन कार्यक्रममा त्यही गाउँका गिनेचुनेका मै हुँ भन्ने नेताहरु र समाजसेवीहरु नेपाली राष्ट्रिय पोशाक दौरा,सुरुवालमा ठाट्टिएर उपस्थित भएका थिए । उनिहरुका गफहरु पनि त्यस्तै ठुला ठुला थिए । सबैले एकार्कामा आफ्नै छोरा,छोरिहरु र आ-आफ्नै बढाइ,चढाइका कुरा गरिरहेका थिए ।
त्यही बिचमा एउटा भद्र,भलाद्मी हुँ भन्नेले पोशाकको बारेमा पनि केही कुरा उठाइ रहेको थियो जुन कुरा यस्प्रकारको थियो '' साँच्चै भन्ने हो भने मान्छेलाई पोशाकले पनि उस्को ब्यक्तित्वको राम्रो परिचय दिन्छ जस्तै आजकलको फेशन छ नि ठुलो ठुलो लुगा लगाउने,टालिएको च्यातिएको जस्तो लगाउने,टोपी फर्काएर लगाउने यी यस्ता फेशन गर्नेहरु पढाइमा पनि असफल हुन्छन बानी ब्यहोरा पनि ठीक हुँदैनन त्यसैले मैले त मेरा छोरा,छोरीलाईहरुलाई त्यस्तो लगाउनबाट बन्चित गरेकोछु र भरसक नेपाली पोशाक बिर्सनु हुन्न भन्ने शिक्षा बारम्बार दिइरहेको छु । आज पनि मैले छोरालाई दौरा,सुरुवाल लगाएर नै यो कार्यक्रममा आउने आदेश दिएको छु।''उस्ले आफ्नो तर्क के राखेको मात्र थियो , अर्को एकजनाले फेरी आफ्नो तर्क अगाडि बडायो। खै! म त यो पोशाकले मान्छेको परिचय दिन्छ भन्ने कुरामा सहमत छैन । पोशाकले मान्छेलाई सुहाउनु,नसुहाउनु ,राम्रो देखिनु,नदेखिनु भन्ने कुरा हुन सक्छ तर ---ब्यक्तित्व बिकास चाँही हुन्छ जस्तो लाग्दैन। मेरो छोराको उदाहरण नै छ नि त्यस्ले त्यस्तै लुगा हरु लगाउछ म पनि कत्ती सम्झाउछु यस्तो लुगा नलगा तलाई समाजले राम्रो ठान्दैन। यस्तो लुगा लगाउनेलाई राम्रो भन्दैन भनेर त र मान्दैन उल्टो मलाई नै चुप गराउने खालको जवाफ दिन्छ।''बाबा मान्छेको भित्री मन सफा हुनु पर्छ,देशप्रतिको भावना स्वचछ हुनु पर्छ त्यही हो देशप्रतिको आस्था दौरा सुरुवाल लगाएर,देशको जयगान गाएर मात्र देशको उन्नती हुने भए आज देशको यो हाल हुन्थ्यो ?तपाइ आँफै सोच्नुहोस् त?तपाइहरु जस्तै दौरा,सुरुवाल लगाउने हरु नै होइनन देशका नेताहरु ?की हामी जस्ता 'हिप हप'लुगा लगाउने हरु हुन त ?खै त !मैले यस्तै लुगा लगाएर पनि कक्षामा पहिलो भैरहेको छु। इमान्दार छु,घर,समाज,देशको बोझ भए जस्तो लाग्दैन,बरु हजुर हरुलाई पो अनेक थरिका आरोप,प्रत्यारोपहरु खप्न परेको मैले देख्दैछु। देशको लागि नै केही गरौ भन्ने उदेश्य लिएर पड्दैछु।'' उस्ले आफ्नो छोराको वाक्यङ्शहरु के पुरा गर्न लागेको मात्र थियो। यत्तिकै मा दुइजना पुलिसहरुले एकजना दौरा,सुरुवाल लगाएको युवकलाई दुइवटै हातमा समातेर ''लौ भन तँ कुन नेताको छोरा होस् ? राष्ट्रिय पोशाक लगाएर समाजमा अनैतीक काम गर्ने ?''भन्दै ल्याइ रहेका थिए यो द्रिश्य देखेर सबै अवाक भै रहेका थिए। त्यो युवक उही थियो जस्को बुवाले अलिक अगाडि मात्र पोशाकको बर्णन गरिरहेको थियो। आफ्नो छोराको प्रसङ्सा गरेर सबैलाई मौन बनाएको थियो त र ---अफ्सोच !उसैको छोरा नै पुलिसको फन्दामा परेर बेइज्जत्ति हुँदै सबैको अगाडि प्रस्तुत हुँदा उस्लाई मरेतुल्य भयो। त्यो द्रिश्यले सबै मौन भए। सबैले आत्मासात गरे कि साँच्चै दौरा,सुरुवाल लगाएर मात्र देशभक्त र असल नागरिक हुन्छ भन्ने छैन। पोशाकले बाहिरी आवरणमात्र देखिन्छ त र ---भित्री चरित्र थाहा हुँदैन। यो पाठ सबैले मनन गर्न सक्षम बने। कार्यक्रम स्थगित भएको जानकारी भयो। सबै किङ्कर्तब्यबिमुढ बनेर आ -आफ्नो घरतिर लागे ।